Mmadụ asaa nwụrụ n'ọgba aghara ọdụ ụgbọ elu Kabul dịka ụgbọ elu azụmahịa niile kagburu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Mmadụ asaa nwụrụ n'ọgba aghara ọdụ ụgbọ elu Kabul dịka ụgbọ elu azụmahịa niile kagburu
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Mmadụ asaa nwụrụ n'ọgba aghara ọdụ ụgbọ elu Kabul, dịka ụgbọ elu azụmahịa niile kagburu
Ụfọdụ ndị mmadụ egbuo jidesiri ike n'ụgbọ njem ụgbọ agha ndị agha US ka ọ na -efepụ, mana ha dara nwụọ obere oge ka ọ fụchara.
Ndị nkịtị Afghanistan nwere nkụda mmụọ kwụsịrị ịpụpụ ndị agha.
Ụfọdụ ndị mmadụ egburu araparawo n'ụgbọ njem ndị agha US ka ọ na -efepụ.
Ndị agha US gbalịsiri ike igbochi igwe mmadụ ahụ n'otu ntabi anya, akụkọ wee malite ịgba egbe na stamping na -amalite.
Egburu ndị nkịtị Afghanistan asaa na ọdụ ụgbọ elu Kabul, gụnyere ụfọdụ ndị dara n'ụgbọ elu ụgbọ elu ndị America na -apụ apụ, ìgwè mmadụ akwụsịla ụgbọ elu niile si n'isi obodo Afghanistan, ndị ọrụ US na Kabul na -akọ.
N'ime abalị Sọnde niile, ndị agha US webatara iji chebe mwepụ nke ndị nnọchi anya America na ndị ọrụ gbalịsiri ike igbochi ọtụtụ ndị Afghanistan na-enweghị atụ pụọ n'okporo ụzọ na ọdụ ụgbọ elu Kabul Hamid Karzai, ugbu a bụ naanị ụzọ dị n'etiti ndị Taliban na-achịkwa. Afghanistan na mpụga ụwa.
Ụfọdụ ndị mmadụ egbuo jidesiri ụgbọ elu ụgbọ agha ndị agha US ike ka ọ na -efepụ, mana ha nwụrụ ka ọ na -adịghị anya ụgbọ elu ha dabara na ọnwụ ha.
A kwụsịtụrụ ụgbọ elu azụmahịa na Kabul na Sọnde, mana ìgwè ndị Afghanistan na-enweghị olileanya juputara n'otu ọdụ ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu n'agbanyeghị agbanyeghị, na njedebe ikpeazụ iji nweta ụgbọ elu si n'isi obodo Afghanistan.
Ndị agha Amerịka gbalịsiri ike igbochi igwe mmadụ ahụ n'otu ntabi anya, akụkọ wee malite ịgba egbe na stampụ na -akụ.